Falanqayntaada ayaa la waayey Calaamadda | Martech Zone
Sabti, Noofembar 6, 2010 Khamiis, Janaayo 16, 2020 Douglas Karr
Jimcihii, waxaan ka hadlay eduDEV, shir ay isugu yimaadeen barayaasha jaamacadaha iyo waaxyaha suuq geynta, kuna saabsan isticmaalka falanqaynta. Inta badan dhagaystayaashu waxay adeegsadaan Google Analytics, sidaas darteed bandhigga ayaa loo habeeyay. Halkii aan ku soo bandhigi lahaa bandhig kale oo caajis ah oo ku saabsan Google Analytics, waxaan doonayay inaan u soo bandhigo dhagaystayaasha saamayn waxa ay leeyihiin Analytics codsiyada ayaa maqnaa iyo wixii qalab kale ah oo meesha yaallay si loo buuxiyo meelaha banaan.
Aaladaha aan xusay ee ku jira Soo bandhigida falanqaynta:
Google Analytics URL Dhise - qalab fudud oo lagu soo saaro ololehaaga ololeynta ee Google Analytics.
Raadinta Raadinta Google iyo Qalabka Webmasters-ka ee Bing.
Shaybaarada Maamulka si loola socdo qiimeynta ereyga ee guud ahaan boggaaga Google iyo Bing / Yahoo!
SEOmoz barashada hagaajinta mashiinka raadinta iyo qalabkooda PRO ee qiimeynta iyo la socodka horumarkaaga SEO.
Meelaha Google in lagu daro, wax laga beddelo, oo wax laga beddelo meheraddaada ku saleysan natiijooyinka raadinta Google. Bing iyo Yahoo! iyaga sidoo kale.
Bit.ly Raadinta URL. Hubso inaad iska diiwaangeliso koontada 'Pro' oo aad isticmaasho boggaaga gaaban. Shirkaddoodu waxay kuu oggolaaneysaa inaad kala socoto koonto kasta oo URL gaagaaban.
Sysomos, Radiyoo6, Lithium (horay. ScoutLabs), Calaamadaha, Warqadaha Google, Toosh, Tweetbeep, Backtweets, Tweetmeme iyo Trackur dhammaantood waxay bixiyaan dhadhan kala duwan oo ah la socodka bulshada iyo sumcadda.
Klout - cabbiraadda saameynta iyo awoodda bulshada dhexdeeda.
FeedPress - Falanqaynta quudinta RSS.
Isbeddellada Google iyo Raadinta Google ee raadinta.
Dab-damis - barmaamij adag oo wax lagu duubo oo aan ku martigelinno Podcast suuq geynta leh mitirro dhageysi oo adag.
vimeo iyo Youtube labaduba waxay bixiyaan xoog Analytics ku saabsan daawashada iyo qaybinta waxyaabaha aad ka kooban tahay fiidiyowga.
Webtrends Falanqaynta Mobilada, Webtrends Falanqeynta Facebook, Webtrends Martida Xogta Martida iyo Webtrends tayadoodii.
Waxaan u maleynayaa inaan xuso Slideshare sidoo kale! Slideshare waxay bixisaa tirakoobyo ku saabsan sida bandhigyadaada loo arko oo loogu qaybiyo khadka tooska ah.
Tags: Analyticsbandhig falanqeynsheybaarada maamulkaedudevAnalytics google-diriddakoronto
Dacwad ma u haysaa Isniinta… Xayeysiiska?